Indawo efanelekileyo yokuchitha iiholide zakho! ibekwe kwi Praia da Amorosa e Viana do Castelo, 2 imizuzu ukuhamba ukusuka elunxwemeni, 5 km ukusuka kwisixeko esihle. Indlu ikumgangatho we-4 (ene-elevator) kunye negaraji yabucala enokufikelela ngokulula. Kule ndawo unako ukonwabela indawo yendalo, ezolileyo kunye noxolo ukuze uphumle kakuhle. Ungandwendwela isixeko saseViana do Castelo esinamanqaku aliqela omdla wembali kunye nenkcubeko. Wamkelekile!
Lo indlu okulala ama-2 inye kunye esililini kabini, ikhitshi yaxhobisa (esitovini, eziko, microwave, njengesicocisi, kumatshini wokuhlamba impahla, ukuba umatshini wokomisa, umatshini ikofu, ngetoaster, iketile, efrijini kunye efrijini) igumbi lokuhlambela kunye yokuvasa (gel ishawa, ishampu , iitawuli, iphepha kunye nesomisi seenwele) kunye negumbi lokuhlala elinesofa, iTV kunye ne-wi-fi. Indlu yintsha kwaye inobushushu obuphakathi.
4.91 ·Izimvo eziyi-87
IAmorosa yindawo ezolileyo, enemakethi encinci eyi-1min ukusuka kwigumbi lokuhlala, ivenkile yepastry kunye nolwandle kunye neecafe ezininzi kunye neendlela zokuhamba. Yindawo eluhlaza apho unokunxibelelana nendalo, hamba uhambe, ubukele ukutshona kwelanga elwandle kunye nokukhwela ibhayisekile.
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo kwaye ndikwazise malunga nento onokuthi uyindwendwele kwisixeko saseViana do Castelo.
Inombolo yomthetho: 104132/AL